ချင်းတွင်းမြစ်အတွင်း သောင်ပြင်ကျယ်ပေါ်ပါက မီးဘေးကျရောက်တတ်၍ ဒေသခံများ အန္တရာယ်ကင်း သဲပုံစေ? - Yangon Media Group
ကနီ်၊ မတ် ၃
ချင်းတွင်းမြစ်တွင် ယခုနှစ်၌ သောင်ပြင်ကျယ်ကြီး ပေါ်ထွန်းသဖြင့် ဒေသ၏အတိတ်တ ဘောင်အရ မီးဘေးအန္တရယ် စိုးရိမ်ရသောကြောင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီး ယင်းမာပင်ခရိုင် ကနီမြို့နယ်မှ ဒေသခံများ စုပေါင်း၍ သောင်ပြင်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းက အန္တရာယ်ကင်းသဲပုံစေတီတည်ကာ ကုသိုလ်ပြုထားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသညေ်။ ကနီဆိပ်ကမ်းတွင်ယခုကဲ့သို့ သဲသောင်ပြင်မျိုး မပေါ်ခဲ့သည်မှာ ရှစ်နှစ်ခန့်ကြာခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ပေါ်လာသဖြင့် ဘေးအန္တ ရာယ်ကင်းစေရန် ရည်မှန်းကာ သဲပုံစေတီ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရှေးလူကြီးတွေကတစ်ဆင့် ပြောလာတဲ့စကားပေါ့။ အရင်ကလည်း မီးဘေးဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကို ရှောင်ဖယ်နိုင်အောင် ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ် တော်တွေကိုရည်မှန်းပြီး စေတီတည်ကုသိုလ်ပြုကြတာ”ဟု ကနီမြို့ခံ ကိုပြည့်အောင်နိုင်က ပြောသည်။ သဲပုံစေတီကို ဥာဏ်တော်ကိုးတောင်၊ အလျားအနံ ကိုးပေစီ ဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုဝါးပညာရှင်များအကူညီဖြင့် တည်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး တည်ထားစဉ် ဆရာတော် ကြီးများအား ပင့်ဖိတ်၍ အန္တရာယ် ကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကာ လာမည့်မြန်မာလ တပေါင်းလတွင် ဘုရားအမှူးပြုသော သံဃာ တော်များကိုလည်း ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူ၍ အမျှပေးဝေခြင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကနီဒေသတွင် တဘောင်စကားမှာ ”ကနီသောင်ထွန်း မီးလောင် ကျွမ်း၊ ကနဲသောင်ထွန်းတံငါကျွမ်း” ဟု ပေါ်ထွက်ထားသည်။ ယခင်ကလည်း ကနီမြို့ဘက် ခြမ်းတွင် ချင်းတွင်းမြစ် သဲသောင် ပြင်ကြီးပေါ်ခဲ့သည့် ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၉ ရက်နှင့် ၁၉၆၇ခုနှစ် ဧပြီ ၇ ရက်တို့တွင် မြို့လုံးကျွတ်နီးပါး မီးဘေးသင့်ခဲ့ဖူးကြောင်း ဒေသခံ များကဆိုသည်။
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာ၍ဟုဆိုကာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ နေ့စဉ် အလုံးအရင်းဖြင?
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ မြို့နယ်များသို့ ကွင်းဆင??